Ngokuguquka kwesimo sezulu sizophoqeleka ukuthi sifuduke | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - uClaudio Álvarez
Izitshalo nezilwane, kufaka phakathi thina bantu, zidinga izinkulungwane, kwesinye isikhathi izigidi zeminyaka ukujwayela izimo ezintsha zemvelo. Inkinga ngokushintsha kwesimo sezulu njengamanje ukuthi siyasheshisa, okudala lokho abanye asebevele bekubiza ngokuthi ukuqothulwa kwesisindo kwesithupha.
Izinhlobo eziningi zezilwane nezitshalo ziyanyamalala futhi / noma zisengozini yokunyamalala. Ekupheleni kwekhulu leminyaka, iplanethi yoMhlaba izobukeka yehluke kakhulu ngaphandle kokuthi kwenziwe okuthile ukuyivimbela. Okwamanje, uma lokhu kuqhubeka, isazi semvelo uMarten Scheffer, osethole umklomelo weBBVA Foundation Frontiers of Knowledge, ingxoxo ini "ngokuguquka kwesimo sezulu sizodinga izindawo ezintsha zokuhlala".
Umhlaba awusidingi; empeleni, uma singaze sinyamalale, iplanethi izolandela. Kepha siyamdinga, okungenani size sihlanganise amanye amaplanethi. Kuze kwenzeke lokho, sizobona ukuthi imifula yamakhorali iba mhlophe futhi ife kanjani njengoba izilwandle ziba ne-esidi kakhulu, noma njengoba amahlathi asezindaweni ezishisayo ephelelwa yizinhlobo zezinto eziphilayo. Mayelana nalokhu, uScheffer uchaze ukuthi izihlahla zikhula ukuzivumelanisa nezimo zasendaweni, kepha uma lezi ziguquka kakhulu zingaba nezinkinga eziningi ukuzivumelanisa. Amandla okuphila aguqukayo asengozini.
Awunakuba nehlathi elishisayo elinemvula engaphansi kuka-1500mm ngonyaka, kepha ngeke ube nalo uma uqhubeka nokugawulwa kwamahlathi futhi ungasebenzisi imithombo yemvelo ngokwanele. Kepha ukukhiqiza ukudla kwesibalo sabantu esikhulayo, okwenziwayo njengamanje akukona nje ukugawulwa kwamahlathi kuphela, kodwa futhi nokwelapha izitshalo ngemikhiqizo yokwenziwa eyonakalisa inhlabathi Futhi, ngenhlanhla, benza buthakathaka izitshalo ngokwazo (ingasaphathwa ingozi empilweni yethu).
Ngaphezu kokushintsha kwesimo sezulu, isintu kufanele silwe ezindaweni eziningi ngezingxabano ezihlomile, indlala kanye nokuntuleka kwamanzi. Inselelo enkulu ngokungangabazeki kuzoba ukufudusa abantu abaningi abafudukayo beyofuna impilo engcono emhlabeni onabantu abaningi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ngokuguquka kwesimo sezulu sizophoqeleka ukuthi sifuduke
Ingabe kukhona ukuphila emafwini? Yebo! Noma kubukeka sengathi cha